Kismaayo News » Jaamacadda Kismaayo oo dufcadii 8aad ka qalin-jabisay
Jaamacadda Kismaayo oo dufcadii 8aad ka qalin-jabisay
Kn: Madaxweynaha dawlad gobolleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa maanta ka qayb galay xaflad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday ka qalin-jabisay jaamacadda Kismaayo. Ardadan oo ahayd dufcadii 8aad ee jaamacaddu soo saarto kuwaasi oo ka qalinjabiyay culuumta kulyadaha kala duwan ee jaamacaddu leedahay ayaa ayaga iyo waalidoon tooda iyo kuwa xaasleyda ahba waxaa ka muuqday farxad iyo reyn-reyn.
Madaxweyne Axmed oo ardayda mid mid u gudoonsiinayay shahoodooyinka isla mar ahaantaana kalmad dhiiri galin iyo balanqaad isugu jira goobta ka jeediyay ayaa sheegay inay mudnaanta koobaad siinayaan dhanka shaqaalaysiinta ardayda dalka wax ku baratay si looga reebo tahriibka iyo dal kooda ka hayaamaan. Wuxuu sidoo kale madaxweynuhu amaanay maamulka iyo macalimiinta jaamacadda Kismaayo asagoo sheegay in Jaamacaddu ay tahay tii dhashay Jubbaland (hooyadii Jubbaland) maadaama shirkii lagu yagleelay maamulka ay Jaamacaddu marti galisay.
Jaamacadda Kismaayo ayaa haatan kamid ah jaamacada ugu tayo roon Soomaaliya marka laga hadlaayo dhanka waxbarashada. Jaamacadda ayaa sidoo kale dhiirigalinaysa dhalinta da’da yar ee wax ku barata dugsiyada sare ee magaalada Kismaayo iyo waliba guud ahaan gobolka.